न्यूजिल्याण्डका आक्रमणकारी अदालतमा उपस्थित, पाँच बन्दुकको प्रयोग गरेको खुलासा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
न्यूजिल्याण्डका आक्रमणकारी अदालतमा उपस्थित, पाँच बन्दुकको प्रयोग गरेको खुलासा
क्राइस्टचर्च । न्यूजिल्याण्डको क्राइस्टचर्चमा दुई मस्जिदमाथि हमला गरेर कम्तीमा ४९ जनाको हत्या गर्ने हमलाकर्तालाई शनिबार अदालतमा पेश गरिएको छ । अष्ट्रेलियाली नागरिक ब्रेन्टन ट्यारेन्ट, २८, अदालतको कठघरामा जेलको सेतो टिसर्ट र हत्कडीमा उपस्थित भए । उनीमाथि हत्याको आरोप लगाइएको छ ।
न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्दा अर्डर्नले हमला निकै सुनियोजित ढङ्गले गरिएको र उनीसँग बन्दुक राख्ने लाइसेन्स भएको जानकारी दिएकी छिन् । हमलाको क्रममा उनले पाँचवटा बन्दुक प्रयोग गरेको उनले बताइन् । शुक्रबारको हमलापछि देशमा बन्दुक राख्ने कानूनमा परिवर्तन गरिने प्रधानमन्त्री जसिन्दाले जानकारी दिइन् ।
पुलिस अनुसन्धानबारे जानकारी दिँदै उनले अहिलेसम्म तीनजनालाई पक्राउ गरिएको जसमध्ये दुईको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिइन् । दुबैको अहिलेसम्म कुनै आपराधिक रेकर्ड सार्वजनिक भएको छैन । यसैबीच घटनास्थलबाट पक्राउ गरिएका अन्य हतियारधारी व्यक्तिलाई रिहा गरिएको छ । अनुसन्धानमा उनीहरु पुलिसलाई सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको पत्ता लागेको छ ।
क्राइस्टचर्चकी मेयर लिएन डालजीलका अनुसार दुई मस्जिदमाथिको हमलाले शहरलाई सधैंका लागि परिवर्तन गरेको छ । उनका अनुसार शनिबार झण्डा आधा झुकाइनेछ र शहरमा हुने थुप्रै खेल र मनोरञ्जनको कार्यक्रम रद्द गरिएको छ । मेयरका अनुसार स्थानीय प्रशासन मुस्लिम समुदायसँग मिलेर मारिएका व्यक्तिहरुको अन्तिम संस्कारका लागि उचित स्थानको प्रबन्धमा जुटेको छ ।